IINGING ZKLS. I-IMP kunye ne-EXP. CO., LTD unamava eminyaka engama-20 kwiofisi yorhwebo ebekwe kwisixeko esihle sonxweme, eNingbo, eZhejiang, china.our iimveliso eziphambili zezi: itote, ibhegi, ibhegi yezemidlalo, ingxowa yezimonyo epholileyo, ibhegi yokuhlamba, ibhegi kamama, ibhegi yokuhamba kunye nezinye izinto zebhegi kunye izincedisi .Siyindibanisela yemveliso kunye nenkampani yorhwebo. Nabasebenzi Professional, izixhobo zale mihla kunye nomgca ibandla, sibonelela abathengi bethu iimveliso ezisemgangathweni kunye nexabiso kukhuphiswano. Iimveliso zethu zithobela imigangatho esemgangathweni yamazwe aphesheya, kubandakanya i-FDA, i-CE / i-EU. Sizinikele ekuphuhliseni nasekuyileni iimveliso ezitsha ezifashiniweyo kubathengi bethu.Kwiinzame zabaselula, abanomdla, iqela lethu lobuchwephesha kunye neminyaka yophuhliso, sithumele iimveliso zethu kumazwe amaninzi: uMzantsi Yurophu, uMntla Melika, uMbindi Merika, iAfrika. , EMzantsi Melika, eMpuma Yurophu, eNtshona Yurophu. Iimveliso zethu zithandwa kakhulu kwaye zenze ukuba abathengi bethu bazithembe. Senza uhlolo olungqongqo lomgangatho ngaphezulu kwebhetshi nganye / imveliso ukugcina inkqubo yolawulo lomgangatho. Singahlangabezana neemfuno ezahlukeneyo kunye nemigangatho evela kwiintlobo ezahlukeneyo zabathengi. Inkampani yethu ibambelela "kuMgangatho oPhakamileyo kunye neXabiso loKhuphiswano" ifilosofi, inika abathengi umgangatho kunye nobungakanani beentlobo ezahlukeneyo zeemveliso kwaye zilungile emva kweenkonzo zokuthengisa. Inkampani yethu iya kwandisa isikali sokusebenza kunye nophuhliso oluzinzileyo lwezoqoqosho, ukufuna ngokunyanisekileyo amaqabane, intsebenziswano elungileyo yokholo kunye nokufuna uphuhliso oluqhelekileyo, ukubhala isahluko esitsha kubuchwephesha be-elektroniki.Samkela ngokufudumeleyo nangokunyaniseka bonke abahlobo kunye nabathengi kwihlabathi liphela ukusindwendwela kwaye uxoxe ngentsebenziswano okanye wabelane ngobuhlobo.
Iimveliso zethu ukuhambelana nemigangatho kwemigangatho amazwe ngamazwe, kuqukwa FDA,, CE / EU. Sizinikele ekuphuhliseni nokuyila iimveliso ezintsha soyis'ingqondo customers.We yethu ukuqhuba uhlolo engqongqo umgangatho phezu kwibhetshi / imveliso nganye ukugcina inkqubo yolawulo lomgangatho. Inkampani yethu siphakamise 'High kunye Ixabiso uKhuphiswano "bulumko, ukunika abathengi kunye umgangatho nobungakanani kweentlobo ezahlukeneyo iimveliso kunye okulungileyo emva iinkonzo yokuthengisa. Inkampani yethu kwandisa isikali ukusebenza kunye nophuhliso oluzinzileyo womnyango kwezoqoqosho, ngokunyanisekileyo efuna amaqabane, ukholo elungileyo intsebenziswano afune uphuhliso eqhelekileyo, ukubhala isahluko entsha elektroniki eziphakamileyo-zobugcisa.
Siyazamkela abathengi abatsha nabadala kwiinkalo zonke zobomi ukuze uqhagamshelane nathi ukuba nobudlelwane kwezoshishino elizayo yaye yaphumelela nokuxabisana!
izimvi DB ibhegi ezivenkileni , ibhegi yokuthenga, ibhegi emhlophe DB ezivenkileni , opinki DB ibhegi ezivenkileni , PU shopping bag , ibhegi yemihla ngemihla,